आखिर किन राख्नु हुँदैन फ्रिजमा अण्डा ? – दैनिक नेपाल न्युज
आखिर किन राख्नु हुँदैन फ्रिजमा अण्डा ?
काठमाडौँ । हामी सामान्यतया धेरै खानेकुरा फ्रिजमा राख्छौ तर अन्डा भने कहिल्यै पनि फ्रिजमा राख्न हुँदेन् । फ्रिजमा अण्डा राख्दा यसको बाहिरी खोलमा रहेको ब्याक्टेरिया स्वास्थ्यका लागि नराम्रो असर गर्छ । यदि अन्डालाई फ्रिजमा राखियो भने सामान्य तापमा राख्दा वाष्पिकरण हुने आशंका बढ्दछ ।
यसबाट अण्डाको बोक्रामा रहेको ब्याक्टेरियाको गति बढ्न सक्छ र अण्डाभित्र पस्ने सम्भावना बढ्दछ । यस्तो अण्डाको खानु स्वास्थ्यका लागि एकदमै खतरानाक मानिन्छ । फ्रिजमा राखिएको राखिएको अण्डा उसिन्दा छिटो फुट्छ । यसकारण पनि । केक बनाउनको लागि फ्रिजमा राखिएको अण्डा रामे मानिदैन् । सामान्य टेम्प्रेचर मा राखिएको अण्डा धेरै दिनसम्म टिक्दछ ।
अण्डाको बाहिरी भागमा रहेको फोहोरलेफ्रिजमा भएको अरु खानेकुरालाई पनि संक्रमित गर्न सक्छ । यसकारण अण्डालाई फ्रिजमा राख्दा धेरै किसिमको संक्रमण हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले कहिल्यै पनि अन्डालाई फ्रिजमा राख्न हुँदैन् । फ्रिजको चिसोले अण्डाको केही पौष्टिक तत्व समेत नष्ट गर्छ ।